वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : November 2008
वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ November 26, 2008
अस्ति आइतबार जन्त गईयो, अड्डाको सहकर्मी कोन्दोउ (नाम परिवर्तीत)को। कुनै जापानीको विहेमा जाने अवसर जुरेको यो पहिलो पटक हो।------------------------------------जापानी संस्कृतिलाई नजिकैबाट हेर्न खासै पाईएको छैन भनेपनि हुन्छ अझै। जापानीसंगका कुराकानीमा कहिलेकाहीँ सोध्दा पनि उनीहरु त्यति उत्साहपूर्वक जवाफ दिँदैनन् (मेरो ब्यक्तिगत अनुभवमात्रै हो है यो, जापान बस्ने अरु साथीहरुको अनुभव फरक हुनसक्छ)। उनीहरु अहिलेको जापानका सांस्कृतिक परम्पराहरु खासै 'जापानी' छैनन् भनेजस्तो गरेर कुरा गर्छन्। 'शिन्तो' प्रथा (जहाँसम्म लाग्छ) जापानमै जन्मेको धार्मिक मान्यता हो। चीन हुँदै बौद्ध धर्मको प्रवेश भएपछि शिन्तो र बौद्ध धर्मको समन्वयको जगमा हामीले बुझ्दै आएको जापानी संस्कृति ('पूरानो' जापानी संस्कृति भनौं एकछिनलाई) उभिएको छ। एक-डेढ शताब्दी यताबाट, विशेष गरी दोश्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिमी मान्यताहरुको प्रभाव ब्यापक रुपमा बढ्दै गएको छ, जसको एउटा ठूलो भागको रुपमा क्रिश्चियन सांस्कृतिक मान्यताहरु रहेका छन्। अहिलेको जापानमा शिन्तो, बौद्ध र क्रिश्चियन-तीनवटै मान्यताहरुको प्रभाव रहेको सजिलै देख्न सकिन्छ। यो स्थितिलाई मैले धेरै जापानीहरुको मुखबाट सुनेको यो वाक्यले सटीक ढंगले ब्याख्या गरेको छ; "हामी जापानीहरु जन्मिँदा शिन्तोमार्गी, विहे गर्दा क्रिश्चियन र मरेपछि बौद्ध हौँ।" भनाईको मतलव, छोटकरीमा, अचेलको जापानमा जन्म-संस्कार शिन्तोमार्गका आधारमा, विवाह क्रिश्चियन तरिकाले र मृत्यु-संस्कार बौद्ध धर्मअनुसार हुन्छ। जापानी समाज खासै धार्मिक लाग्दैन, यो कुरा जापानीहरुहरु स्वयं पनि स्विकार्छन्, र म फलानो धर्म मान्छु भनेर भन्ने मान्छेहरु अत्यन्त कम भेटिन्छन्। तर चाडपर्वहरुको सवालमा भने शिन्तो, बौद्ध र कृश्चियन तीनवटै परम्पराका 'भ्याएसम्म'का चाडपर्वहरु मानिरहेका देखिन्छन्। क्रिशमश लगायतका कृश्चियन चाडपर्वहरु मनाउँदा अलिक 'जापानी शैली' पोतिएको पनि हुन्छ, धर्मको आधारमा भन्दा पनि अमेरिकी-यूरोपेलीको नक्कल गर्दै मनोरञ्जनको लागि अपनाईएको जस्तो लाग्छ।-----------------------कोन्दोऊको जन्त ग'को कुरो गर्न बसेको म, कता बरालिएछु! आउनुस् अब कोन्दो(ऊ)को जन्त जाऔँ:)खासमा अस्ति बिहे नभएर WEDDING RECEPTION थियो। बिहे भएको भने जुलाईमै रहेछ। यस्ता कार्यक्रमहरुका औपचारिकता अत्यन्तै कडाइका साथ पालन गरिन्छन्। कालो सूट, छालाको कालो जुत्ता र सेतो टाइ अनिवार्य हुँदो रहेछ वैवाहिक कार्यक्रममा। पछि कहिले प्रयोग हुने हो थाहा छैन, कोन्दो(ऊ)को बिहेमा 'जन्त' जान एउटा 'सस्तो, राम्रो, बलियो, भरपर्दो':) 'निख्खुर' सेतो टाइको जोगाड गरियो। बोलाईएभन्दा केहि पहिलेनै पुग्दा 'बुच्योऊ'(अड्डाका आफना हाकिम, विभागिय प्रमुख) र अरु दुई जना भेटिए। एकछिन हाकिमको 'चेन-स्मोकिङ'ले सिर्जित धूवाँको यातना खप्नेमा परियो।उपहार (नगद) बुझाएको केहि समयपछि एउटा 'चर्चजस्तो ठाऊँ' तिर लगियो सबैलाई। 'चर्च' नभनेर 'चर्चजस्तो' भन्नुको कारणचाहिँ त्यो ठाऊँ प्रार्थना गर्न, धार्मिक उद्देश्यले बनाईएको चर्च नभएर यस्तै वैवाहिक कार्यक्रम गर्नका लागिमात्रै बनाईएको ठाऊँ हो। यस्ता 'बिहे गर्ने चर्च' यत्र-तत्र धेरै देखिन्छन् जापानमा। 'विहे'पूरै कृश्चियन शैलीमा भएको थियो; दुलाहा पहिला 'पादरी'को सामुन्ने जाने, दुलहीका बाउ छोरी लिएर 'चर्च' पस्ने र दुलाहालाई दुलहीको हात दिने, पादरीले यता-उता भट्भटाउने, वर-वधु दुबैले Yes I DO! भन्ने आदि। दुलाहा-दुलही दुबै पश्चिमी विवाह-पोशाकमा थिए।'पादरी'को रुपमा एकजना अधबैंशे गोरा थिए। 'विहे गराउने पादरी' मात्रै पनि हुनसक्छन् ती, 'विहे गर्ने चर्च'जस्तै। तिनले वैवाहिक विधिका कुरा सबै टाकन-टुकन जापानीमै भ्याएका थिए, तर 'विवाह' भनिने 'संस्था'को महत्व र यसलाई जोगाउन र दिगो बनाउन चाहिने प्रेम र त्यागको बारेमा लेखिएको, बाइबलको एक अंशभने अंग्रेजीमा पढेका थिए। तिनको अंग्रेजी सुन्दा तिनी अमेरिकी अथवा बेलायती भने होइनन् भन्ने थाहा हुन्थ्यो। त्यो चर्चबाट फर्केपछि सामूहिक फोटो सेसन र फोटो सेसन पछि भोज थियो। भोज चल्दै गर्दा प्रोजेक्टरमा दुलाहा-दुलहीका जन्मदेखि अहिलेसम्मका फोटाहरु मिलाएर बनाईएको एउटा परिचयात्मक प्रस्तुति र आउन नसकेका साथीहरुका भिडियो सन्देश पनि देखाईएको थियो। ----------------------------------------------कोन्दोऊ र निशिमुरा (श्रीमती कोन्दोऊ)लाई हार्दिक बधाई र सफल दाम्पत्य जीवनको शुभकामना!
फोड्न सकिएन, त्यसैले 'चुसियो' मात्रै भनौं न अब! --------------------------------------------कुरो जगदीश शमशेर राणाज्यूको कृति 'सेतो ख्याकको आख्यान' हो। 'नरसिंह अवतार' पनि एकदम गाह्रो लागेको थियो,यो पनि त्यस्तै रहेछ!मैले बुझेसम्म, नरसिंह अवतारभन्दा फरक, यो एउटा उपन्यासको रुपमा छ र काठमाण्डौं उपत्यकाको इतिहासको एउटा कालखण्डमा घटेका घटनाहरुमा केन्द्रित रहेको छ। यसमा मल्ल राज्यको अन्तिम दिनहरुमा, विशेष गरी राजा जयप्रकाश मल्लको कान्तिपुर राज्यमा, घटेका बिभिन्न घटनाहरुलाई आधार बनाएर त्यतिबेलाको राजनीति र सामाजिक जीवनको चर्चा गरिएको छ। क्षय हुँदै गएको मल्ल राज्यको कान्ति र बढ्दै आएको 'कोर्काली' गोर्खालीहरुको दबदबाले उपत्यकाका राजादेखि रंकसम्मको मनमा जन्माएको त्रास र निराशालाई अत्यन्त कठिन दार्शनिक ब्याख्यानका माध्यमबाट ब्याख्या गरिएको छ। संस्कृत शब्दावलीमा राम्रो पहुँच नभएको हुँदा राणाज्यूको लेखन शैली मेरा लागि 'हाडे ओखर' भयो फेरि पनि!किताबको नामैले पनि जनाउँछ 'सेतो ख्याक' प्रमुख पात्र र चरित्र हो यो आख्यानको। कठिन हुँदा-हुँदैपनि त्यतिखेरको समाज, राजनैतिक ब्यबश्था र उपत्यकाका तीन राज्यहरुको शत्रुतापूर्ण आपसी सम्बन्ध र त्यो शत्रुतालाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्दै विजयी हुँदै आएको गोर्खा राज्यका बारेमा धेरै नयाँ कुराहरु पनि थाहा हुन्छन् यो आख्यानबाट। साथमा, किताबभित्र धेरै ठाऊँमा उपत्यकाको समृद्ध नेवार संस्कृति झल्मलाइरहेजस्तो लाग्छ । यो किताब पढेपछि नेवार संस्कृतिको बारेमा सकेसम्म धेरै पढ्ने मेरो पूरानो इच्छा अझ प्रबल भएर आएको छ। नेपालको एकीकरणको आफ्नै अपरिहार्यता र महत्व थियो र अझै छ तर एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने एकीकरणपछि नेपालले कुनै ठूलो साँस्कृतिक गौरव थप्न सकेको छैन आफ्नो शिरमा र काठमाण्डौं उपत्यकाको हकमा त कला-संस्कृतिको अधोगतिनै शुरु भयो त्यसपछि। शाहवंशले राज गर्न थालेदेखि यता कला-संस्कृतिलाई दिइनुपर्ने सम्मान र प्रोत्साहनमा ब्यापक ह्रास हुँदै आएको छ। अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले आफ्नो आकार कोर्दा सांस्कृतिक पुनर्जागरणको लागि पनि एउटा पाटो छुट्याउँछ कि छुट्याउँदैन, हेर्न बाँकी छ। ****************************अब 'ख्याक'को बारेबाट कुरा अगाडि बढाऔँ।'ख्याक' उपत्यकाको नेवार समाजको मौलिक मान्यता हो। उपत्यकाको नेवार-इतर अरु कुनै समाजमा पनि यो मान्यता छ भने त्यो नेवारी संस्कृतिबाटै लिईएको होला।मैले ख्याकको बारेमा सुनेको विद्यालय जान थालेबाटै हो। मैले दश वर्ष पढेको विद्यालय विद्यामन्दिर मा. वि.(जो हाल पुरानो नैकाप गा. वि. स., मा पर्छ) को वरिपरि नेवार बस्ती छ। एउटा पूरानो कलात्मक पाटीबाट विद्यालयको शुरुवात गरिएको रहेछ। म एक कक्षामा भर्ना हुँदा पाटीको पछिल्तिर नयाँ विद्यालय भवन बनिसकेको थियो र धेरैजसो कक्षाहरु त्यतै हुन्थे, एक कक्षालाई मात्रै त्यहि पाटीको फलैंचामा राखेर पढाईन्थ्यो। हामीले त्यो पाटीमा ख्याक बस्छ भन्ने सुनेका थियौं, त्यसैले भित्र जान डराउँथ्यौँ। बच्चाहरु धेरै गएर फोहर गर्देलान्, बिगार गर्देलान् भनेर त्यसो भनेको हुनसक्छ किनभने त्यो पाटीमा बेलाबखत स्थानीय नेवार समुदायको भोज पनि हुन्थ्यो रे। तर भोजहरु सधैं विद्यालय बिदाको बेलामा पर्ने हुनाले, हाम्रो मनमा परेको त्यो पाटीको एउटै छापभने सूनसान, भित्र सधैँ अँध्यारो र डरलाग्दो "ख्याकको वासस्थान" नै थियो। सुनेको भरमा 'ख्याक' भनेको भूत-प्रेतजस्तै हो भन्ने धारणा बसेको थियो मेरो, 'भूत'को नेवारी शब्दनै 'ख्याक' हो भन्ने सोचेको थिएँ मैले आजसम्म।जगदीश शमशेर राणाज्यूको यो आख्यान पढेपछि भने कूरो अलि अष्पष्ट हुन थालेको छ। यो किताबबाट मैले बुझेसम्म, सेतो ख्याक मानव, देवता र भूत-तीनटैभन्दा फरक अस्तित्व हो र (कतिपय भूतहरुजस्तो आकार बदलिरहने नभैकन) यसको आफ्नै मौलिक भौतिक शरीर पनि हुन्छ। यो ख्याकको मृत्युसम्मको पनि चर्चा छ। यति बुझिएपनि यो ख्याकको उत्पत्ति कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा आख्यानमा कतै पनि चर्चा छैन। यो आख्यानलाई त्यो चर्चाको आवश्यकता नभएर (छैन पनि) जगदीश शमशेर राणाज्यूले नराख्नुभएको हुनसक्छ अथवा उहाँले आख्यानभित्र कतै सूक्ष्म ढंगले चर्चा गर्नुभएपनि मैले नबुझेको हुनसक्छ।तेसो त, यो आख्यानको मेरो (अत्यन्त सीमित) बुझाईनैपनि पूरै गलत हुनसक्छ।संयोगवश, एकजना साथीबाट प्राप्त, जनकलाल शर्माज्यूले लेख्नुभएको "हाम्रो समाज:एक अध्ययन" पढ्न थालेको छु भर्खरै (कुमारजी, किताब फिर्ता हुन अझै केहि समय लाग्ला:))। यसमा पनि चार पृष्ठ 'ख्याक'को बारेमा लेखिएको रहेछ । विषय-सूचिबाट 'जम्प' गरेर सोझै "काठमाण्डूका ख्या वा ख्याक" मा पुगें केहि स्पष्ट भईहालिन्छ कि भनेर। त्यहाँ भने ख्याक (ख्या)लाई भूतकै नेवारी शब्दको रुपमा बयान गरिएको छ। तीन हरफको चर्चा छ यो सेतो ख्याकको बारेमा, यसरी;तुयुह्म ख्या:तुयुह्म ख्याको अर्थ हो सेतो ढेडुवा वानरजस्तो भूत। यो भूत हानिकारक नभएर लाभदायक मानिन्छ। नेवारी भाषामा तुयुको मतलब सेतो भन्ने हुन्छ। त्यसैकारण यस भूतको नाम तुयुह्म ख्या रहन गएको हो।-पृष्ठ ११७जनकलाल शर्माज्यूले अरु ख्याकहरुको उत्पत्तिका संबन्धमा छोटै भएपनि केहि लेख्नुभएको छ, तर यो सेतो ख्याक(तुयुह्म ख्या)को उत्पत्तिको बारेमा भने केहि पनि उल्लेख गर्नुभएको छैन। त्यति साधारण र प्रचलित ख्याक हैन कि यो?! जगदीश शमशेर राणाज्यूले आफ्नो पुस्तकमा कतै सेतो ख्याक अहिलेसम्म पनि रहेको मानिने घरको पनि चर्चा गर्नुभएको छ। अरु ख्याकभन्दा अलि बढी दार्शनिक मान्यता बोकेको ख्याक हुनसक्छ यो। खैर, नजानी-नजानी धेरै कुरा नगरौं। नेवारी संस्कृतिको राम्रो जानकारी राख्ने साथीहरुलाई सोध्नुपर्ला, भेट हुँदा। ****************************मैले हाडे ओखर भनेपनि यहाँलेपनि पढ्न भने नछोड्नुहोला। 'हाडे ओखर' चुस्दा मात्रै त यति मिठो छ भने फोडेर भित्रको गुदी खाँदा झन् कस्तो होला! तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, मलाई पक्का विश्वास छ।
फेरि कालो वर्षातको याम आयो लाग्छ बादलमा लुकी घाम आयो! खोटा सिक्काले भरेर खल्तीहरु नया 'दण्ड, दान,भेद, साम' आयो! बस्ती कसरी पसे कंकालहरु? प्रेतहरुको तामझाम आयो! प्वाँख पलाए जस्तो छ कमिलाको पुतली हुँ भन्दै छलछाम आयो! अधूरै नराख्नु अब इतिहास! अवसरको अन्तिम खाम आयो!-नोभेम्बर १४, २००५
केहि वर्ष जापान बसिसकेपछि जापानले असाध्यै राम्रो प्रभाव पारेका धेरै कुराहरुमध्ये एउटा, जापानीहरुको धेरै पढ्ने बानी पनि हो।यहाँ आएपछि मेट्रो, रेल र बसमा रहेका अधिकांश मान्छेहरुले पढिरहेको देख्दा अनौठो लागेको थियो केहि समयसम्म त। भिडभाड भएर उभिनुपरेको बेलासमेत कतिपय मान्छेहरु पढिरहेका हुन्छन्। धेरैजसोले यसरी पढेर बस्दिएपछि रेलमा हल्ला कमै हुन्छ। (हाईस्कूल पढ्ने केटीहरुको ग्याङ पनि छ भने कुरो बेग्लै हो, गोलाकार भएर ढोका अगाडि बसेर अरु-अरुको भागको पनि हल्ला गर्दिन्छन् तिनीहरुले:)) लामो-छोटो जुनसुकै यात्रामा निस्कनुपरे पनि केहि पढ्ने सामाग्री नबोकी निस्कँदैनन् जापानीहरु। अत्यन्त सस्तो र तिब्र गतिको इण्टरनेट सुबिधा भएपनि सबैजसो मानिसहरु कुनै न कुनै एउटा पत्रिकाको ग्राहक पनि बनेकै हुन्छन्। आफूले राम्ररी नबुझेको विषयमा प्याच्च बोलिपनिहाल्दैनन्, त्यसबारेमा पढ्न सामाग्री खोज्न थाल्छन् बरु। मबाट नेपालको बारेमा पहिलोपटक सुनेका मान्छेहरु केहि दिनपछि नेपालको बारेमा मभन्दा धेरै कुरा जान्ने भएको देखेको छु मैले।यूरोप, अमेरिकातिर बस्ने साथीहरुको कुरा सुन्दापनि यस्तै हो भन्छन् उनीहरु। विकसित समाजका मान्छेहरु बढी पढ्छन्। विकसित र अविकसित देशहरुको चरित्रगत फरक छुट्याउनुप-यो भने 'पढ्ने बानी' सूचिको माथितिरै आउँछ होला। 'पढ्नु' भनेर यहाँ विद्यालय-कलेजमा गरिने 'औपचारिक' अध्ययनलाई भनिएको होइन, यस्तो अध्ययनको आफनै ठूलो महत्व छ। तर यसले मात्रै मानिसको र समाजको समष्टिगत चरित्र र ब्यक्तित्व निर्माण गर्न सक्दैन। आफ्नो पेशासंग सम्बन्धित अथवा असम्बन्धित नयाँ-नयाँ कुराहरु खोजेर पढ्ने बानीलाई 'पढ्नु' भन्न खोजिएको हो। हो, हाम्रो देशमा अझै स्तरीय औपचारिक शिक्षा सबैको पहुँचमा पुगिसकेको छैन। यो अभावको केहि अंशलाई पनि अनौपचारिक शिक्षा अथवा पढ्ने बानीले पुर्नसक्छ। तर मुख्य समस्या के छ भने हाम्रो समाजमा ‘पढ्नु’लाई त्यति ‘सम्मानजनक’ मानिँदैन। यसो भन्दा धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ तर ‘पढ्ने’ बानी भएका मानिस हाम्रो समाजमा ‘अनौठा’ जन्तु ठानिन्छन् र ‘पडन्ते’ वा ‘किताबको किरो’ भनेर गिज्याईन्छन्। त्यस्ता मान्छेले चाड-बाड, बिहे-भोज आदिमा गफ गर्ने साथी समेत भेट्टाउँदैनन् तर तास खेल्नेहरुको लागि भने‘संसारै’आफ्नै हुन्छ। ‘यो मान्छेले पढ्न मात्र जानेको छ, अरु केहि पनि जानेको छैन’ भनिनु सामन्य हो हाम्रो समाजमा, जबकि मौका पाउँदा किताबी ज्ञानले ब्याबहारिक जीबनलाई राम्रैसंग नसघाउने होइन। यहाँसम्म कि औपचारिक शिक्षालाई समेत खासै भित्री मनदेखि सम्मान दिँदैन हाम्रो समाजले। त्यसलाई कुनै पेशा समात्ने भ-याङजस्तो मात्रै मानिन्छ। समाजको यस्तै चिन्तनको असरले गर्दा औपचारिक शिक्षा पूरा गरेर कुनै पेशा समातेपछि धेरैजसोले पढ्नै छोडिदिन्छन्, पत्र-पत्रिका वा साहित्यमात्रै होइन आफ्नै पेशासंग सम्बन्धित सामाग्रीहरु समेत छुँदैनन्। अनि विस्तारै ती मान्छेहरुको चिन्तन शैली र क्षमता एकदम भुत्ते हुँदै जान्छ। भुत्ते चिन्तन शैली र क्षमताको बहुमतले सरकार र ब्यूरोक्रेसी सञ्चालन गरेपछि देश कस्तो बन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भैसकेकै छ।यहाँ देखेजस्तै, पढ्ने बानी हाम्रो राष्ट्रिय संस्कृतिको पनि एउटा अभिन्न र सम्मानजनक भागको रुपमा कहिले स्थापित होला?नयाँ नेपालको हल्ला चलेको बेला यस्तो पहलले पनि ठाऊँ पाउनेछ भन्ने आशा गरौं। र हामीले आ-आफ्नो ठाऊँबाट पनि सक्दो बल गर्नुपर्ने दायित्व त छँदैछ। Posted by
बधाई बाराक ओबामा!!! बधाई जो बाइडेन!आज दिनभरि अमेरिकी चुनावको नतिजा हेरेर बित्यो भनेपनि हुन्छ। प्राइमरीबाटै मैले धेरै समय बिताएँ, अमेरिकी चुनावको बारेमा पढेर। रिपब्लिकनभन्दा डेमोक्रेट मन पर्ने हुनाले बाराकको जीतको कामना र प्रार्थना गरेको थिएँ मैले पनि। प्राइमरीमा भने म 'हल्का' हिलारीपट्टि ढल्किएको थिएँ:) भोट हाल्न नपाएपनि संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देशको सर्वोच्च पदको लागि हुने चुनावप्रति सबै देशका सबैजसो मान्छेको चासो हुन्छ। अमेरिका अझै विश्वको एक्लो महाशक्ति हो (अबका केहि वर्ष अथवा एक-दुई दशकभित्रै यो स्थिति फेरिने छाँटपनि नदेखिएको होईन) र यसका हरेक गतिबिधिले समग्र विश्वलाई धेरै प्रभाव पार्छन्। अमेरिकाको राष्ट्रपतिले गलत निर्णय लिँदा दुनियाँले दु:ख भोग्नुपरेका धेरै उदाहरण छन्। त्यस्ता उदाहरणहरु खोज्न इतिहासमा पस्नुपनि पर्दैन, हाम्रो आँखै अगाडि अझै जर्ज डब्लु. बुश खडा छन्। त्यसैले अमेरिकाले कस्तो राष्ट्रपति छान्छ भनेर सारा दुनियाँ उत्सुक भएर हेर्छ, हरेक चार वर्ष। फेरि विश्वको माध्यम भाषाको रुपमा रहेको अंग्रेजी भाषा, इण्टरनेटको बढ्दो उपस्थिति र सशक्त अमेरिकी संचार माध्यमहरुका कारणले अमेरिकी चुनाव सबैको पहुँचमै पनि छ। अमेरिका मन परेपनि, नपरेपनि यो राजनीतिक 'नाटक'बाट अछूतो रहने को होला?!ओबामाको ऐतिहासिक उम्मेदवारी र ऐतिहासिक जीतको कुराले संसारभरिका संचार-माध्यम रंगिएका छन्। उनको जीत अमेरिका र समस्त विश्वमै रंगभेदको अन्त्य पक्कै होईन तर रंगभेदको अन्त्य र समानताको दिशामा एउटा ठूलो किर्तिमान भने पक्कै हो। उनको जीतले वर्तमान विश्वका थुप्रै राजनीतिक-साँस्कृतिक-सामाजिक विभेदहरुको अन्त्य गर्ने अभियानमा अत्यन्त सकारात्मक सन्देश दिएको छ।म्याराथनजस्तो चुनाव सकियो, बाराकले जिते। हार्ने जोन मक्केनले सहज हार स्विकारे र जित्नेलाई बधाई दिए। जित्नेले हार्नेसंग विनम्रतापूर्वक देश चलाउन उनको पनि सहयोग मागे। एउटा परिपक्व लोकतन्त्रको सौन्दर्य देखियो। हाम्रा लागि यस्ता कुरा अझै 'आकाशको फल---' जस्तो हो।ओबामाको वास्तविक परीक्षा अब शुरु हुनेछ। उनको नीतिले अमेरिका र समग्र विश्वको आसन्न आर्थिक संकट चाँडै टार्ने छ कि छैन, विश्व शान्तिको दिशामा जाने छ कि छैन---दुनियाँले त्यतातिर आँखा सोझ्याईसकेको छ। उनको ब्यक्तित्व र ब्यक्तिगत क्षमताको ठूलो असर हुनेनै छ, त्यतिनै महत्व उनले अब जम्मा पार्ने 'टिम'को पनि हुनेछ।बाराक ओबामा र जो बाइडेनलाई सफल कार्यकालको शुभकामना!
गोर्खापत्रको यो रुप फेरिने छाँट देखिएको छैन अझै। उल्टो झन घघडान 'गोर्खापत्र' बन्ला जस्तो पो छ! पात्रहरु फेरिएका जरूर हुन्, तर कथा उस्तै छ।"गोर्खापत्र- कल्ले कतिपटक?" पोहर एस.एल.सी मा गुल्टेको कालेले यसपाली दोश्रोपटक छोला गोर्खापत्र, सचिव हुँदासम्म शा.अ. डम्बरनारायणले दशचोटि जति पढ्ला गोर्खापत्र, अबला एकल धनमाया- जाली जेठाजूले जग्गा हडप्न खोजेछ माईती झिकाएर सुनी मात्र एक पाना गोर्खापत्र, 'विक्रम' र 'शमशेर' हरु ठान्छन्- अरुलाई गोर्खापत्र कोच्याउनु तीनको अधिकार हो आफू त किन घिच्थे र गोर्खापत्र? यस्तै हो साथी! गजब छ यो गोर्खापत्र एक बाजी मैले पनि पढेथें तिमीले कतिचोटि पढेका छौ गोर्खापत्र? -५ अप्रिल, २००६